तपाईं बीस वा यी सिक्का तीस लागत एक खेलौना प्राप्त गर्न सक्छन् वास्तवमा एक सिक्का लागि - उत्तेजना धेरै उच्च छ! के यी मिसिन साना बच्चाहरु प्रेम! पिताजी, त्यसैले, ठूलो स्मार्ट र बलियो, सजिलै फ्लफी खरायो बाहिर खींचती, र हामी बटन प्रेस अन्तमा दिन भने - जीवन को लागि एक नायक सबै।
विद्यार्थीहरूको लागि यो कहिलेकाहीं आफ्नो sympathies मा नै उमेर स्वीकार गर्न कुनै तरिका वित्तीय योजना मा मात्र उपलब्ध छ।
पुरस्कार र तिनीहरूलाई कसरी जीत संग मिसिन स्वामित्व गर्ने व्यवसायी, तपाईं पक्कै पनि शीघ्र छैन। तिनीहरू फरक चासो छ!
तर प्रयास र प्रशिक्षण को वर्ष व्यर्थमा थिएनन्, र केहि ढाँचाहरू र तपाईं कसरी खेलौना मिसिन जीत बताउने नियम पहिचान गर्न मदत गरे।
सबै मिसिन नमुना वरिपरि काम गर्दै:
एक सिक्का, बिल, ब्याज, आदि सम्मिलित।
इच्छित बटन वा जोइस्टिक गर्न रोमाञ्चक खेलौना क्रेन निर्देशन;
एक सफल embodiment यसलाई कब्जा संग "समाप्त" बटन प्रेस, खिलौना क्रेन गर्न हटाइएका र माथि उठाएर छ;
क्रेन, उत्पादन ट्रे गर्न उत्प्रेरित गर्छ उसलाई एक खेलौना, तपाईंको winnings राख्छ।
तर समस्या को सबै भन्दा तेस्रो चरण पहिले नै गर्दै छन्: क्रेन खेलौना टिप्न गर्दैन वा छनोट अप - ड्रप, र पनि उत्पादन ट्रे बाटो मा गुमाउन सक्छ। अब हामी खिलौने संग मिसिन पिट्न कसरी यी गल्ती नगर्न र कसरी हेर्न।
त्यहाँ एक विकल्प छ भने, त्यसपछि तपाईं राम्ररी हेर्न गर्नुपर्छ क्रेन देखि कब्जा र बलियो र सबैभन्दा प्रभावित छन् जो मिसिन, आउन घाँसका पातहरू मा।
केही डिजाइन मा ब्लेड गरिबी विशेष गरी कडा वा सञ्चालन समयमा छाडा भएका छन्।
खिलौने संग मिसिन कसरी पिट्न उहाँले एक्लै खडा र एक बरु shabby नजर छ जब? मा पढ्नुहोस्।
दोस्रो हात मा एक अभियान समान खिलौने चयन सिद्धान्त, त्यो छ, के तपाईं चाहनुहुन्छ र के खान लिन।
तपाईं एक खेलौना प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि एक नेत्रहीन प्रकाश, फ्लफी र मात्रा छनौट गर्नुहोस्। को "catchy" विवरण नोट: laces, चूसनेवाला, अतिरिक्त तत्व (को खुट्टा मा बेरी)। यो क्रेन तिनीहरूलाई मुग्ध छ सम्भव छ, र कब्जा थप मजबूत हुनेछ।
स्थान खिलौने पनि आवश्यक छ। सधैं उत्पादन ट्रे नजिक छ कि एक लिन्छन्। त्यसपछि त्यो पनि बाटोमा झर्ने, त्यहाँ हुन्छ कि सम्भावना, धेरै उच्च हुनेछ।
कसरी मन छैन चपलता प्रयोग गरेर खेलौना संग मिसिन पिट्न? सजिलो!
एक क्षण लिन र प्ले हेर्नुहोस्। धेरै मिसिन कि जीत, उदाहरणका लागि, हरेक दशौं वा बीस-पहिलो कन्फिगर छन्।
त्यो उहाँले लागि कुनै पनि खेलौना आकर्षित गर्न र ट्रे यसलाई ल्याउन सक्षम हुनेछ भन्ने हो, जीतन राउन्ड ब्लेड को क्रेन कब्जा धेरै बलियो हुनेछ मा छ।
यो, पाठ्यक्रम, के गर्न सजिलो तपाईं एक लोकप्रिय ठाउँमा छन् भने जहाँ धेरै स्लट मिसिन वा ग्राहकहरु।
मिसिन मा प्रणाली सेटिङहरू पहिचान, बस आफ्नो पालो प्रतीक्षा - र आफ्नो खल्ती मा एक खेलौना!
यस्तो प्रक्रिया पनि अधिक बेहतर र थप आर्थिक छ। तिनीहरूले भन्न रूपमा, बलियो काम हात र बुद्धिमानी - टाउको।
ज्ञान - शक्ति
कसरी खिलौने संग मिसिन पिट्न थाह, तपाईं अब प्रत्येक स्टोर को प्रवेश मा खडा यी ग्लास destroyers डराएका हुनेछ। तपाईं भविष्यमा बलियो मित्रता फारम गर्न सक्छन् जो देखि बच्चा एक निश्चित अधिकार, बनाउन सक्षम हुनेछ। तपाईं आफ्नो कौशल र लामो स्मृति सुखद, राम्रो स्मारिका संग प्रिय विजयी। यस्तो कार्यहरू र कुराहरू अक्सर बढ्न साँचो प्रेम!
र उपहार मा के बचत! तपाईं एक बच्चाको जन्मदिन पार्टी जाने? को कौशल तपाईं जन्मदिन बच्चाको लागि र सबै इमानदार कम्पनी को लागि मात्र होइन एक उपहार हुनेछ आधा एक घण्टा बिताए गर्दा, मेशिन गर्न र्याप। केही सिक्का र सबै यो - र तिनीहरू छोराछोरीको लागि राम्रो जादूगर हुनेछ।
वरिपरि जाने छैन पुरस्कार संग मिसिन गरिरहेको! कसरी जीत, तपाईं थाहा छ।
रूस मा क्षेत्र। "Azov-शहर" - हाम्रो लस भेगास
लेन्सलाई कसरी छनोट गर्न? व्यावसायिक सल्लाह
Isabeli Fontana। जीवनी ब्राजिलियन मोडेल
एक चुम्बक संग नङ पालिस - सौन्दर्य उद्योग को नयाँ सिर्जना
Stepan Nikolaev - Ataman Cossack सेना
कसरी र कहाँ venereal रोगहरु लागि परीक्षण गर्न?
कसरी मुद्दा को Baubles बुनाई गर्न सिक्न
Illusionist दाऊदले Copperfield: जीवनी, फोटो